သင်္ချာ Calculator ကို APK ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » သင်္ချာကင်မရာတို့ကသင်္ချာပြဿနာများ Calculator ကို-ဖြေရှင်း
သင်္ချာကင်မရာ APK ကိုတို့ကသင်္ချာပြဿနာများ Calculator ကို-ဖြေရှင်း
ဓာတ်ပုံကိုယူပြီးအားဖြင့်သင်္ချာဖြေရှင်းချက်လုပ်ဖို့သင်္ချာ Calculator ကိုသော့ဖွင့်! သင်္ချာ Calculator ကိုအခြေခံဂဏန်းတွက်စက်အခမဲ့နှင့်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူတစ်ဦးအသုံးဝင်သောလွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှုကိုဂဏန်းတွက်စက်လိုလားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစတိုင်ဂဏန်းတွက်စက်လည်းနေဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စွာသင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်တစ်ညီမျှခြင်း solver နှင့်တစ်ဦးအကြီးအသင်္ချာအိမ်စာ solver ဖြစ်ပါသည် ကင်မရာ ဒီဂဏန်းပေါင်းစက် app ကိုပြီးသားနဲ့ဂဏန်းပေါင်းစက် app ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအသင်းကတီထွင်နေသည် 1,000,000 + အသံအတိုးအကျယ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ကျနော်တို့နေဆဲအကောင်းဆုံးဂဏန်းတွက်စက် app ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့မွှုပျနှံ။ DOWNLOAD အခုအချိန်မှာသူကများနှင့်ထိုသို့ကြိုးစားကြ အခမဲ့!
အခြေခံပညာ Calculator ကို: ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအခြေခံသင်္ချာအခမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို။
အကွိမျမြားစှာပြဿနာများဖြေရှင်း: တစ်ကြိမ်မှာ Multi-line ကိုသင်္ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
မှားယွင်းတဲ့အဖြေကိုပြင်ပေး: သင်၏အဖြေကို Check နှင့်မှားမြားကိုပြင်ဆင်ရန်။
သိပ္ပံနည်းကျ Calculator ကို: Casio 570 အပေါ် အခြေခံ. ။
တွက်ချက်မှုသမိုင်း : သင်၏တွက်ချက်မှုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ
ဂရိတ်ဒီဇိုင်း: လက်ဟန်ခြေဟန်အပေါ်အခြေခံပြီး Nice user interface ကို။
floating Window: အခြားအက်ပ်အထက်တွင်တွက်ချက်ထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ထဲတွင်အခြို့သောမြင်ကွင်းများမှာပြထားတဲ့ကြော်ငြာအကြောင်းအရာရှိပါလိမ့်မယ်။ m.facebook.com/ads/ad_choices: အသေးစိတ်ကို
ဿုံ, S8, S8 အစွန်း, Huawei P7, LG က Nexus 7X စတာတွေက Samsung Galaxy S10, S5 အစွန်းကိုထောကျပံ့
ဿုံအန်းဒရွိုက် 8 ကိုထောကျပံ့
သင်္ချာ Calculator ကိုယခုတဦးတည်း time.From မှာတဦးတည်းစက္ကူပေါ်မှာ Multi-line ကိုသင်္ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်, သငျသညျလကျကိုတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းအားဖြင့်သင်္ချာပြဿနာများရေတွက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ချိန်တည်းမှာ5ပြဿနာများထက်ပိုမိုဖြေရှင်းပေးရန်သင့်အား 10 စက္ကန့်ကြာပါတယ်။
ဒါဟာဂဏန်းတွက်စက်မသာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးအသုံးဝင်သောအိမ်စာစစ်ပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့ပြုလုပ်ပြီးစီးပြီးနောက်သင်သည်သင်၏သင်္ချာအိမ်စာစစ်ဆေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အဖြေကမှားသည်မှန်လျှင်, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့ကပြင်ပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးဖန်တီးမှုလမ်းအတွက်သင်္ချာဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ သငျသညျသင်္ချာအိမ်ပြန်အလုပ်လုပ်နေကြစဉ်တွင်သင်တို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂဏန်းတွက်စက်စမ်းပါ။ အခြေခံသင်္ချာပြဿနာနှင့်ညီမျှခြင်းနှစ်ဦးစလုံးသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
သင်္ချာကင်မရာတို့ကသင်္ချာပြဿနာများ Calculator ကို-ဖြေရှင်း
7.43 ကို MB
စူပါ T ကအုပ်စု